Hoy Ny Iraky ny Firenena Mikambana: Miatrika Fanararaotana Sy Fitsaratsaram-poana Ireo Mpialokaloka Ao Malezia · Global Voices teny Malagasy
Hoy Ny Iraky ny Firenena Mikambana: Miatrika Fanararaotana Sy Fitsaratsaram-poana Ireo Mpialokaloka Ao Malezia
Voadika ny 03 Desambra 2014 7:06 GMT
Vakio amin'ny teny čeština , Français, 日本語, Español, English
Ankizy Silamo Rohingya avy any Myanmar, izay miaina any Malezia amin'izao fotoana izao, hita matory any an'efitrano fianarana ao amin'ny Sekolin'ny Rohingya ao Kuala Lumpur. Sary an'i Sammy Foo, Fizakàmanana @Demotix (1/31/2013)
Ao Azia Atsimo Atsinanana, matetika ireo firenena ao no miatrika fitobaky ny mpifindra monina avy ao anatiny sy avy any ivelan'ny faritra. Toerana fifamezivezena sy fandalovana i Malezia ho an'ireo mpifindra monina marobe mikaroka toerana azo antoka taorian'ny nandosirany ny fifandonana sy ny famoretan'ireo vondrom-piarahamonina mpifanolo-bodirindrina.
Na izany aza, tsy mandray ireo mpitsoa-ponenana ireo ho toy ny mialokaloka sy mpangataka fialokalofana ny governemanta ao Malezia izay manasokajy azy ireny ho “mpifindra monina an-tsokosoko”, ary tsy avela hahazo ireo filàna fototra atolotry ny fanjakàna izy ireny. Ankoatra izany, araka ny artikla 6 ao amin'ny Ialàna momba ny fifindrà-monina, ireo olona rehetra tsy manana taratasy ara-dalàna hidirana any dia iharan'ny fkapoka mandrivorivon'ny lalàna satria omena sazy “fampidirana am-ponja tsy mihoatra ny dimy taona izy ireny no sady koa mahazo vely karavasy tsy mihoatra ny enina.”
Araky ny taratasy milaza ny zava-misy avy amin'ny Kaomisaria Ambony Ao amin'ny Firenena Mikambana Miahy ny Mpitsoa-ponenana na ny United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR), misy ireo amin'ny 35.000 eo ireo mpangataka fialokalofana tsy voarakitra ara-dalàna ary hatramin'ny 143.435 ireo mpangataka mpitsoa-ponenana sy mpangataka fialokalofana voarakitra ao amin'ny biraon'izy ireo any Malezia hatramin'ny faran'ny volana Martsa 2014.
Ny fiainana tsizarizarin'ireo mpitsoa-ponenana ao amin'ny firenena no navoitra vao haingana tao amin'ny tatitry ny Al Jazeera. Nandritra ilay tafatafa, noresahan'i Richard Towle, solontenan'ny UNHCR ao Malezia ny momba ny fisamborana tsy ara-drariny ataon'ny fanjakana, ny fitrandrahana ireo mpitsoa-ponenana, ny kolikoly, ny tsy firaharahàna ny zon'ny ankizy ary ny tsy fahampian'ny fanohanana tena mahomby an'ireo mpitsoa-ponenana tsy mitsha-mitombo ao Malezia. Hoy izy nanampy:
Entina toy ny mpifindra monina tsy ara-dalàna ireo mpitsoa-ponenana, ary ny mpifindra monina tsy ara-dalàna dia mety hiharan'ny endriky ny faharefoana rehetra ao anatin'ny fiarahamonina. Mety ho voasambotra izy ireny ary hotànana sy hiaina anaty faritra maloto na maizina eo amin'ny fiarahamonina izay misy ny tena taha avo be amin'ny resaka fanararaotana.
Notsinian'ny minisitra lefitra misahana ny trano fonenana, Wan Junaidi Tuanku Jaafar, ilay tafatafa niarahana tamin'ny UNHCR no sady narovany ny governemanta :
Na dia tsy nanao sonia ny fifanarahana momba ireo mpitsoa-ponenana aza isika, dia karakaraina amim-pahamendrehana ry zareo ireny, omena fahafahana mitsabo tena ary azo atao ny mitsidika azy.
Ong Kian Ming, mpikambana iray ao amin'ny antenimiera mpanao lalàna ao Malezia dia naneho ny tsy fitoviany hevitra amin'ny minisitra tompon-toerana :
Ireo valinteny nomen'ny Minisitra lefitra misahana ny Atitany, Wan Junaidi Tuanku Jaffar, tao amin'ny antenimiera tamin'ny Talata, dia naneho fa tsy fantany velively ny maha-henjana ireo fiampangàna navoaka tao amin'ny fandaharana iray tao amin'ny Al Jazeera, na dia izy aza no nohadihadiana tao amin'ilay fandaharana. Raha raisina manokana, ny valintenony dia mampiseho fa tsy fantany taneteraka ireo artikla ao amin'ny Fifanarahan'ny Firenena Mikambana Momba ny Zon'ny Ankizy (CRC) izay isan'ny nanao sonia azy i Malezia.
Saingy ilay tanora tsy mataho-masomena lehiben'ny antoko politika Gerakan Rakyat Malaysia, Tan Keng Liang, dia nitondra fomba fijery mifanohitra amin'ny an'ny minisitra misahana ny trano fonenana sy ilay mpikambana ao amin'ny antenimiera:
Manaja ny zon'olombelona ny firenentsika. Saingy raha mbola mitaraina amin'ny fomba fitondra azy ireo mpitsoa-ponenana, dia aza mankaty e. Tsy mila anareo izahay aty Malezia anie rey olona e!
Mihevitra aho hoe tsy maintsy mitady fomba fandraisana toy ny an'ireo Kintana 5 ireo “mpitsoa-ponenana” ireo, ka ny volan'ny mpandoa hetra no hanefàna izany. Ndeha mahazo any!
Nitsena hatezerana avy amin'ireo MAleziana tsotra ireo teny feno hebohebo nataony tao amin'ny Twitter :
Ry @tankengliang malala, amin'ny anaran'ny fahalalahana maneho hevitra dia hajaiko ny fomba fijerinao. Na izany aza dia tena saropady ho an'ny olona iray mpanao politika eto Malezia izany
.@tankengliang Ny azo antoka dia tokony hokarakaraina amim-pahamendrehana ireo mpitsoa-ponenana. Toy ny olombelona. Resaka fitserana koa io e.
Hanosika ny governemanta Maleziana sy ny fiarahamonim-pirenena sivily mba hanao dingana ho amin'izay fanavaozana tena tsy maintsy ilaina mba hanatsaràna ny kalitaon'ny fiainan'ireo mpitsoa-ponenana ve ilay famelabelarana?
Matetika no nandositra ny fiainana feno famoretana sy ny toe-draharaha mahery setra tany amin'ny firenena niaviany ireny mpitsoa-ponenana ireny, mba hikatsaka fialofana ao anatin'i Malezia maoderina sy mandry fahalemana ary hahita fotsiny avy eo fa hay resabe tsy mitombina tanteraka ny teny fanevan'ny fizahantany an'ny governemanta manao hoe ‘Malezia Mikarakara’.
Zava-dehibe ny mahafantatra fa misy fiantraikany amin'ny fiainan'ireo mpitsoa-ponenana ny fepetra any amin'ny faritra maro, miainga amin'ny olan'ny fanànana antontan-taratasy maha -izy ny tena, ny asa, ny trano honenana, ary hatramin'ny fikarakarana ny ankizy, ny fanabeazana ary n y fahasalamana. Ny fiarahamonina iray manana fahalalàna miaraka amin'ny fitsofohana mifamatotra amin'ny resaka zo, dia mety hitondra fiovàna miabo, manaisoatra azy ireo hiala amin'ny fanilikilihana rehefa sendra anatin'ny fotoan-tsarotra ilàn-dry zareo izany.